Myanmar Local News: နတ်/လူ/သာဓုခေါ်နေမှာပါ မာမီ
သြော်.....မာမီ မာမီ မပြောချင်ပေမယ့်လည်း ပြောရဦးမယ်...
ပြောတော့ ပြည်သူတွေကိုချစ်သလေး ဘာလေးနဲံ...
ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲတွင်းနက်နေတာကို မကြည့်ရက်ဘူး ဘာဘူး နဲ့...
ပြည်သူနဲ့ တစ်သားတည်းရှိသလေး ဘာလေးနဲ့...
ဘာမဟုတ်တဲ့ ခရီးကို လေယာဉ်စီးလုံးငှား ပြီး သွားမယ် ဆိုပါ့ လား...
ဟိုကလှူပါတယ်..ဒီက လှူပါတယ် ဆိုပြီး လျှောက်ပြောနေလည်း ယုံကြည်စရာအကြောင်း မရှိပါဘူး.....
ဘာကြောင့်လေယာဉ် စီးလုံးငှား နဲ့ သွားချင်ရတာလဲ?????
စီးလုံးငှာလေယာဉ်နဲ့ သွားတယ်ဆိုပြီး ထင်ပေါ်ကြော်ကြားချင်တာလား?????
လမ်းခရီးလုံခြုံ မှု့အတွက် စိတ်ပူမနေပါနဲ့... မာမီ လို ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ် ဆုရှင်တယ်ယောက်/ တစ်သက်လုံး အစိုးရကို အကောင်းမမြင်ခဲ့သူ တစ်ယောက်ကို ဘယ်လက်နက်ကိုင်သူပုန်မှ ချောင်းပစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး.....စစ်တပ်ကလည်း ဗိုလ်ချုပ်သံယောဇဉ်နဲ့မို့ မာမီ ဘယ်လိုပဲ ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ် ချောင်းပစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး.....
ထင်ပေါ်ကြော်ကြားချင်ရအောင်လဲ မာမီလို မိဘမျက်နှာ မထောက်ထားသူ...
နိုင်ငံခြားသားကို အားကိုးအထင်ကြီးသူ...မြန်မာနိုင်ငံတော်ကို အဘက်ဘက် မှ ၀ိုင်းရံ ပိတ်ဆို့စေ သူ... မြန်မာ/ဗုဒ္ဓဘာသာထက် မွတ်စလင်/အစ္စလာမ်ကို ဦးစားပေးသူ...သူတို့ဖာသာ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ငါ့သားတွေ မပါ ပြီးရော ဆိုသူ...တစ်ဦးအတွက် ထင်ပေါ်ကြော်ကြား ပြီးသားပါ.....
သမ္မထက်သာတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးလည်း မတွေးလိုက်ပါနဲ့ ...ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ လက်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဟာ နိုင်ငံကောင်းရာကောင်းကြိုး ဆောင်ရွက်နေရတာသာမက အာဆီယံ နိုင်ငံ တွေရဲ့ အရေးကိစ္စတွေကိုပါ စီမံဆောင်ရွက်နေရတာကြောင့် မာမီလို သာမန်ပါတီဥက္ကဌ/လွှတ်တော် အမတ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှ ယှဉ်လို့မရတာကို သိထားပေးပါ.....
ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာ...မာမီ လေယာဉ် စီးလုံးငှားသွားမယ့် ငွေကြေးတွေကို ဒီလို မိဘမဲ့ ကလေးတွေအတွက် နို့မှုန့်ဘိုးလေးဖြစ်ဖြစ် ၀ယ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် နတ်/လူ/သာဓုခေါ်နေမှာပါ မာမီ..........
ကလေးငယ် ဘ၀ဆက်တိုင်း ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးကနေ ကင်းဝေးနိုင်ပါစေ.....